Kuedza Haiku OS: Imwe Njodzi yeLinux? | Linux Vakapindwa muropa
Kuedza Haiku OS: Imwe Njodzi yeLinux?
edumix | | Updated on 16/03/2017 11:41 | General
Haizove Linux asi yakavhurika sosi, kutandara kweizvo zvaizivikanwa zvishoma BeOS Uye izvo nhasi zvinouya zvine mutsindo, tinotaura nezveHaiku OS iyo nezuro ndakave nemukana wekuyedza.
Chero bedzi paine weird inoshanda sisitimu, pachave nema geeks anozozviedza uye zvakaitika kwandiri kuti ndiedze iyi inoshanda sisitimu kunyanya nekuti haina kunyatso kunetsa kukwira, saka ini handina kuyedza mumuchina chaiwo, asi Ndakaiisa yakananga pane USB.
Haiku OS ndiye mugari wenhaka weBeOS, sisitimu inoshanda kubva kumakumi mapfumbamwe yakanangana nevashandisi vemultimedia uye vasiri makomputa zvavo. Kwemakore vanga vachigadzira iyo system yaisambove yakakurumbira kusvika Palm yavatenga uye vashoma vashandisi vakasara vasina rutsigiro.
Kubva kutanga kwegumi ramakore rapfuura, kuyedza kwakaitwa kwekutangazve iyi sisitimu yekushandisa uye nhasi tine mhedzisiro yekutanga kwayo.
Iyo inoshandisa iyo imwecheteyo mhando ye microkernel kubva kuBeOS uye yakasarudzika kuHaiku.
Iyo yakanangidzirwa kudesktop.
Iyo ine tambo yekuraira, inonzi Terminal.
Zvizhinji zve software yavo ndeyemahara uye kunyange GNU.
Inoenderana nemapurogiramu azvino akadai seFirefox browser kana VLC.
Kuiswa kwezvirongwa kuri nyore, nekungobvisa iyo ZIP kumwe kunhu, kunyanya mufaira rakagadzirirwa zvirongwa, sezvavanozvikurudzira (ini handina chandaisa)
Parizvino zvinokwanisika kuyedza seLiveCD kana kuiisa zvachose
Mhedzisiro yacho inokurumidza sisitimu inoshanda zvakanaka kunyangwe pendrive uye inotanga kekutanga nguva pasina kumisikidza chero chinhu. Mhedzisiro yacho inopenya uye chakanakisa chinhu ndechekuti ingori alpha vhezheni.
Zvandaikoshesa pandakatanga system yaive chimwe chinhu chakafanana neichi, tarisa:
Zvese izvi zvinonditungamira kuti ndishamise kana ichigona chaizvo kukwikwidza kweGNU / Linux, iri pasina mubvunzo iri yepamusoro kupfuura Hurd iye.
Kana ikakura zvakanyanya, pachezvangu handizeze kuishandisa, ive nayo pendrive yangu ndotora mukana nayo chero kupi.
Mufananidzo unoratidza ichi chinyorwa Haiku-tan naVadim Bobkovsky
Haiku yepamutemo webhusaiti.
Mablog maviri muCastilian nezvazvo, Haiku Colombia y Haiku Spain
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » General » Kuedza Haiku OS: Imwe Njodzi yeLinux?
Haiku inovimbisa chaizvo uye yakave nekushingaira kusimudzira munguva pfupi yapfuura. Ndinovimba vanoenderera seizvi, nekuti seimwe sarudzo anoita kunge mukwikwidzi akanaka kwazvo;)
Ndakagara ndichizvitaura, ma microkernels, nekugona kwavo inguva yemberi, pamwe haina kukuvara, pamwe inogona kunge iri Haiku OS, ndiani anoziva, asi ndipo painosvika.
Inonakidza. Zvinoita senge kwandiri se "njodzi" kuLinux. Musiyano unogona kupa zvakawanda kune izvi zveOS uye nezvimwe kana zviri zvemahara. Ndinoda kuzviedza. Kunze kwekuve yakavhurwa sosi, Linux inogona zvakare kutora mukana wekufambira mberi kwayo uye Haiku nenzira imwecheteyo.
yakanakisa post makorokoto, ini ndinoda aya maficha
Mune software yemahara hapana njodzi nekuti chimwe chirongwa chakazvimirira chinoonekwa. Izvo zvese kushanduka. Zvatiri chokwadi ndechekuti mune ramangwana GNU inoshandisa microkernel. Inogona kunge iri Linux 3, Hurd, kana pamwe Haiku, asi kuvepo kweiyi budiriro hakuise panjodzi sisitimu yedu yekushandisa, asi zvinopesana.
Handifunge kuti ingozi kune linux ... Haiku chirongwa chinonakidza kwazvo, ini ndakamboona hurukuro kubva kune mumwe wevagadziri aive muLa Plata ... Saizvozvo, handifunge kuti zvinoitika kuva freak, saHurd, reactOS kana dragonfly ... Tichaona mafambiro anoita ...
"Chatiri nechokwadi ndechekuti mune ramangwana GNU ichashandisa microkernel."
Handina chokwadi kwazvo ... Zvakanyanya kuoma kugadzira microkernel ... Uye takura madhiraivha ese ... Uye ita zvese kuyedzwa uko Linux iri pamusoro payo ...
Pindura kuna juanman
Uye chii chainacho? Izvo hazviite kuti zvikone kuita. Zvirinani kuti watove neinjiniya yekumashure yaitwa, nekuti kugadzira ese madhiraivhi akatogadzirwa kuLinux angadai akave akaomarara zvakapetwa kakapetwa pane kuendesa kune imwe kernel. Iyo microkernel inguva yemberi, iwe unofanirwa kungomirira kuti mumwe munhu abude nekuita kwakanaka kuita. uye monolithic linux yatinoziva ichave isisipo.
Ini ndinoshandisa microkernels, kana xxl kernels, kana pajolera, asi chokwadi ndechekuti ndakazviedza uye zvinoita kunge zvinonakidza (Kunze kwekuti kumisikidza usb modem yakavakirwa pawvdial kunondiita simbe).
Pamwe ingori imwe chete isinganzwisisike ... asi chokwadi ndechekuti, kana zvirizvo zvatiri kuenda, vangangoita vese vashandisi veLinux mageek, uye kana, mubeta, inotsigira kupenya, macodec uye nemutambo usinganzwisisike, hazvina basa. kwandiri kune wangu mudiki ^ ^
Zvinonakidza kuti nhasi ndaverenga zvinyorwa zviviri zvakasiyana nezveHaiku. Imwe pano uye imwe yacho: http://diegocg.blogspot.com/2010/05/opinando-sobre-haiku.html
Pindura kuna Josep
Izvo zvakanyanya kusiyanisa uye nekusiyana, iko kuwedzera kuedza kwekuve kugona kwevanogadzira uye zvigadzirwa zvakanakisa zvemushandisi zvatichawana ...
Edza iyo kakawanda uye iwe uchaona kuti inotonhorera sei.
Sandman dante akadaro
Ini ndatoishandisa kana ndichida kutanga pc yangu nekumhanya kuzere, teerera kumimhanzi kana kusevha internet mune zvakanyatsonaka zvinhu, zvinoda kushandiswa mazuva ese asi inogona kushandiswa kupindirana ndiyo yangu yechitatu Os mushure me linux (yandinovenga zuva rega rega zvimwe) windows 7 (iyo iri kuve inodikanwa ... ipapo iye anondikumbira kuti ndiiite) haiku iyo ini yandinoda uye ndinonzwisisa nemoyo murefu uye kusvika zvino yakwanisa kuchinja uye inotanga kugutsa zvandinoda zuva nezuva.
Pindura kuna Sandman Dante
Ida iyo kana wifi, kurira, yekuisa .. Vhidhiyo
Pindura kuna mariangustiada
Dhani @ KenSei: ~ $ akadaro
… Ngozi ?? Musiyano unogara uchitungamira mukuvandudzwa kwemushandisi wekupedzisira, kunyanya kana zvasvika kune yemahara software. Izvo zvinogoneka, kunyange zvingangoita, kuti Linux sekuziva kwedu inopedzisira yanyangarika nekufamba kwenguva, mushure mekuti Linux yese monolithic kernel uye kuti, kunyangwe ichipa zvimwe zvakanakira, zvakare inoita kuti debugging uye scalability zviome. Izvo zvakashata here? Kwete, inonzi shanduko, uye nekukurumidza kana kuti gare gare Linux inogona kutsiviwa nechimwe chinhu nekukurumidza, chine simba, chinoshanduka ... zvirinani. Chinhu chakanyanyokosha ndechekuti software yemahara "iri mupenyu", uye pachayo Haiku inoita senge kufambira mberi kukuru kuti, kana ikapedzwa kupfuura alpha vhezheni (uye kunyanya, zvinoenderana nesoftware uye rutsigiro rwehardware) inogona kuve munzira nyowani yekutiza yevashandisi veWindows vasina ruzivo rwezvehunyanzvi, rweavo vanoora mwoyo nematambudziko anovapihwa neWindows asi vari kutonyanya kushingirira kuyedza kumisikidza yavo ATI Radeon mune gnu / Linux: P
Pindura kunaDan @ KenSei: ~ $
Ndichitsvaga pawebhu, ini ndawana iyi ongororo: Barat laptop ongororo: Unofarirei palaptop yako: Linux kana Windows?
Ndatovhota. Ichi ndicho chinongedzo: http://polldaddy.com/poll/3690263/
Kana iyo link isingakutenderi iwe kuvhota, edza iyi:http://poll.fm/273ez
Ndatovhota. Ichi ndicho chinongedzo: http://poll.fm/273ez
Ndichitsvaga pawebhu, ini ndawana iyi ongororo: Barat laptop ongororo: Unofarirei palaptop yako: Linux kana Windows? http://poll.fm/273fb
Dzidza Kunyengera akadaro
Beos iri mune alpha chikamu uye panguva iyo ivo vari kutarisa mukuigadzira kugadzikana! Ngatiregei kuraira mapepa kubva kune elm! Iyo idiki diki yekusimudzira timu, iine nguva diki ivo vanozoisa zvishongedzo uye pijadillas pairi.
Pindura Kudzidza Kunyengera
Suana Jimenez akadaro
Ini ndoda kudzidza Linux, asi zvinoita senge kupfuura kutambisa nguva kudzidza zvakawanda zvakagoverwa,
Izvo hazvindinetse ini kudzidza Java, Python, XHTML, nezvimwe, asi chinhu chakanakisa chingave chekuzvigadzirisa muJava, Pyton, XHTML, nezvimwe. Iko kutambisa nguva nekupararira kusingaperi, kunyangwe maviri kana matatu, kutambisa nguva. Hazvitore hupenyu hwese kuti uzvigadzirise iwe muJava chete, kana phyton.
Ini ndoda kudzidza kubira. Ndeupi kugovera kwaungakurudzira, Debian, Slackware, kana ndeipi. Vanondiudza kuti backtrack, asi backtrack iri vhezheni yedhiian, hazvizove zvirinani kushandisa debian. Vamwewo vanoti Ubuntu asi ndeimwe vhezheni yedhiian, hazvaive nani kushandisa debian.
Ini handinzwisise kuti sei vachiti Linux ndiyo yakanakisa OS munyika. Kana zvirizvo, nechikonzero, zvirongwa zvacho uye kunyange Linux pachayo haina kukwana, semuenzaniso,
Hofisi yeMicrosoft ndeye, ngatitii, 100% yakakwana, uye hofisi yakavhurika ine makumi maviri neshanu uye kunyangwe zvishoma.
Mumwe muenzaniso Photoshop izana zana muzana uye ini ndinofunga inonzi Gimp yakaderera zvakanyanya kudarika makumi maviri neshanu muzana, zvinoita sekunge kutambisa nguva, zvaisazove zvirinani kudzidza Photosop pane Gimp.
Ini ndinonzwisisa kuti vanoti Windows ndeyeavo vane mari yekushandisa. Asi ini handifunge kuti mari ndiyo pembedzo yekuve neyakanaka yekushandisa system. Ini ndinonzwisisa kuti haina hutachiona husina. Asi zvinoratidzika kwandiri zvakanyanya kupfuura Linux. Ini ndaizobhadhara chiuru chemadhora kana zvakatowanda, sekureba sendine yakanaka yekushandisa system.
Ini ndinonzwisisa kuti iro bhuruu screen riripo, asi kudzidza kudzosera zvakare Windows 7 software inogadzirisa dambudziko. Iyo hard drive haina kuparadzwa, unogona kuitakudza iyo kakawanda sezvaunoda.
Izvo zvinotsamwisa kwazvo software mune mazhinji mapurogiramu akakosha uye akakosha senge matlab, spss14, cs4, zvakanaka ndinofunga zana muzana yesoftware, kana 100 muzana, haimhanye. Uye chimwe chinhu, hazvitore hupenyu hwese kudzidza kubata spss99, kana matlab, kana ese ese cs14 mapakeji. UYE KUDZIDZA KUSHANDA ZVAKAWANDA PASI PAMWE CHETE, IZVOZVI ZVAKAWANDA ZVAKAWANDA kutambisa NGUVA.
Ndakaverenga kuti mukomputa kupokana, Windows haina dziviriro, uye yaizokangwa kunge hari yekofi, zvavanoreva iwe unogona kunditsanangurira.
Ini ndoda kuve wekubira, ndinofanira kutanga sei chinofanira kunge chiri kuraira kwangu kwekutanga, chii chinofanirwa kuve matanho angu ekutanga kuve humbavha.
Ndichaonga kukurumidza kupindura kwako.
Pindura Suana JImenez
kuti uve jacker iwe unofanirwa kuve neruzivo rwemberi rwehurongwa nema network ... kune izvo kune mhinduro imwe chete .. DZIDZA! xD an igenieria yekombuta sainzi kana teleco semuenzaniso. Asi uya, kubva pane zvawakanyora .. iwe hauna zano saka tanga nezvakanyanya kukosha, kushandisa iyo keyboard uye mbeva hahahaha;)
Makomputa network akadaro
Oops! Zvakaipa, ndiri kungoita zvekukochekera. Kwaziso.
Pindura kumakomputa network
Iyo haina njodzi, haina madhiraivhi eWifi, uye zvishoma kune USB musanganiswa, haina chero chirongwa chakafanana neMixxx, hapana mukana wekumisikidza mamenu senge muOxx (appmenu-chiratidzo mune debian uye zvigadzirwa, kuuya, njodzi??, hapana
Kana iwe usina linux nonsense yekushandisa raira mitsara kuisa chero chinhu uye kana mumwe munhu achinyunyuta nezvekuti ivo mapenzi sei, vanokuudza kuti "iwe wakarongedzwa nemahwindo", zvirokwazvo tyisidziro
diego valley akadaro
Chaunoti bullshit chishandiso chinobatsira kwazvo chaunogona kushandisa kana kuti kwete.
Uye hongu, iri muHaiku uye ndiri kuenda kukupa iwe dzimwe nhau dzinozoita kuti vhudzi rako rimire kumucheto: ZVIRIwo MUMASHURE.
Kunyangwe mune aya masisitimu iri zvishoma kupfuura chinhu chekutambisa.
Pindura Diego Valle
Chokwadi ndechekuti ini ndaigara ndichifarira mabhon uye zvakanaka, haiku, ndanga ndichigadzirisa mumuchina chaiwo kuti ndiedze, kwete, asi chero nguva ini ndinoiisa pane diski yandinayo linux.
Alberto Garea akadaro
Ini ndakatsaura makore mashoma kukombuta sainzi yezviitiko uye zvirokwazvo ingadai yakave hoot chaiyo. Ini handirangarire ndichiona chimwe chinhu chakareruka uye iine yakajeka graphic kugona uye nyore. yeaya andaifanira kuita pirouettes nemahwindo ini kana xp kuti ndivaendise kudiski kana kuchengetedza kunwa kwegondohwe ...
Pindura kuna Alberto Garea
Zviri nyore kwazvo kuiisa mumuchina chaiwo, asi ini ndakaiyedza pane maviri chaiwo, macomputer eorenji kubva kuChina.
Ndiyo beta 3.
Ndiani anogona kurarama saRichard Stallman?